Mpanamboatra sy mpamatsy vahaolana amin'ny asa fampihorohoroana | Orinasa famokarana vahaolana hiadiana amin'ny fampihorohoroana ao Shina
Ny rafitra HWUDS-1 dia manome ny fahafaha-manao drone jamming ao anaty tranga IP67 mihamafy ho an'ny fametrahana maharitra ao amin'ny trano iray. Tahaka ireo mpangalatra omni-directional rehetra izay mety hiteraka fitsabahana amin'ny fitaovana hafa ny HWUDS-1, dia niresaka an'ity olana ity izahay tamin'ny fiezahana hampiasa hery ambany araka izay azo atao mba handresena ny drôna.
Tohatra azo aforitra (14 metatra)
Ny tohatra azo aforitra dia amboarina amin'ny firaka alimina alika ho an'ny endriny, firaka alimina alefa ho an'ny zana-tohotra, ary tsimatra mampifandray vy tsy misy fangarony, izay hanome anao traikefa miasa mety sy haingana. Ny fotoana mivalona na mivelatra manontolo dia latsaky ny 5 segondra. Izy io dia azo aforitra amin'ny halehiben'ny tranga kely ary hotehirizina amin'ny toerana kely, toy ny vatan-kazo ary ento toy ny kitapo na amin'ny kitapo.
Ny mpitsikilo horonantsary Audio dia afaka manampy ny mpamonjy voina hahita ireo izay voafandrika ao ambanin'ny rava ary mifandray amin'izy ireo. Miaraka amin'ny fakantsary infrared, afaka miasa eo ambanin'ny tontolo iainana tsy misy jiro izy. Ny mpampiantrano dia manana fiasan-dresaka tsy misy tariby, izay azo ampitaina amin'ny alàlan'ny data WIFI na finday.
Ny Finder fakan-tsary miafina no teknolojia azo antoka sy mora ampiasaina indrindra eny an-tsena hitadiavana fakantsary miafina. Ny asany dia mifototra amin'ny fitsipiky ny fampitomboana optique. Ity jargon teknika ity dia manondro ny trangan-javatra izay ahitana taratra ny hazavana taratra avy amin'ny rafitra optika mifantoka toy ny fakan-tsary hita eny amin'ny lalana mitovy amin'ilay hazavan'ny tranga. Midika izany fa raha misy fakan-tsary miafina nohazavaina ary jerena miaraka amin'ny teknolojia Camera Finder dia taratra matanjaka avy amin'ny fakantsary kendrena no hanambara ny toerany amin'ny mpampiasa. Ny Camera Finder dia mitrandraka ity trangan-javatra ity amin'ny alàlan'ny fampiasana peratra misy taratra LED manjelanjelatra namboarina manodidina ny seranan-tsambo. Rehefa mijery efitrano mijery ny seranana mijery ny fakantsary miafina iray miseho eo amin'ny sehatry ny fahitana ny mpampiasa dia hanome taratra mazava ny jiro amin'ny LED.
Ny Tactical Ladder dia vita amin'ny alim-pandrefesana mavesatra mahery sy mahery vaika amin'ny alàlan'ny alikaola sy vy vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ary natao manokana ho an'ny tarika taktika toy ny miaramila, polisy mitam-piadiana, SWAT ary ny fampiharana ny lalàna. Izy io dia novokarin'ny kilasy indostrialy tsy miandany, ary mahazaka tsindry lbs 300. Ny tohatra dia mihosotra amin'ny loko maizina manohitra ny famirapiratana mba tsy hahitan'ny mpandraharaha amin'ny alina noho ny taratra maivana. Ary ny faritra miasa sasany dia misy vokany tsy misy feony, izay tsara handehanantsika amin'ny tontolo mampidi-doza.
Ity fitaovana ity dia mpamaky telefaona finday mahery vaika natokana ho an'ny sehatry ny tontolo iainana misokatra na faritra midadasika amin'ny fiarovan-doha, toy ny fonja, sekoly, miaramila, ozinina lehibe ary orinasa mpitrandraka.
Jammer Frequency Wireless Wide-Band Portable
Ity vokatra ity dia manana ny habetsahany, ny lanjany maivana, izay mora entin'ny miaramila tsirairay. Izy io dia ampiasaina hanakanana ny fifandraisana sy ny fandefasana data eo amin'ny telefaona finday rehetra (2G, 3G, 4G), izay afaka manakana ny sehatry ny olona tsy hampakatra sary amin'ny Internet, fanamorana ny hevitry ny besinimaro. Ary koa, manampy ny fanipazana baomba voafehy lavitra fehezin'ny tariby matetika na finday matetika.
HW-ED-II Anti-terrorism Mute Electric Drill dia karazana fitaovana fandavahana tsy misy tabataba ambany, azon'ny polisy atao ny manapoka lavaka amin'ny rindrina amin'ny alàlan'ny fandefasana herinaratra moana nefa tsy hitan'ireo olon-dratsy, avy eo mijery izay mitranga ao anatiny, mba hamantarana ireo hetsika olona ao amin'ny efitrano manaraka.
Rafitra fahitana amin'ny alina ambany hazavana
Ity fitaovana fahitana amin'ny alina ity dia manome sary zahana famaritana avo lenta mandritra ny andro, ary miasa tsara amin'ny hazavana sy ny hazavana amin'ny alina. Izahay dia mpanamboatra ao Shina, ny orinasanay dia manana fahaiza-manao famokarana mifaninana. Izahay dia matihanina ary afaka manome vokatra 100 napetraka isam-bolana, alefa ao anatin'ny 20 andro fiasana. Ary mivarotra entana mivantana amin'ny mpanjifantsika izahay, afaka manampy anao amin'ny famoahana ny fandaniana eo anelanelany izany. Mino izahay amin'ny herinay sy ny tombotsoanay, afaka manome mpamatsy mahery anao izahay. Ho an'ny fiaraha-miasa voalohany dia afaka manolotra santionany aminao izahay amin'ny vidiny ambany.
Ny Surveillance ball dia rafitra iray natao manokana ho an'ny faharanitan-tsaina tsy misy tariby. Ny sensor dia boribory toy ny baolina. Somary mikitoantoana izy ka tafavoaka velona amin'ny kapoka na dondona ary atsipy any amin'ny faritra lavitra izay mety hampidi-doza. Avy eo dia mandefa horonan-tsary sy horonantsary tena izy hanaraha-maso miaraka. Ny mpandraharaha dia afaka mandinika izay mitranga ao amin'ny toerana miafina nefa tsy amin'ny toerana mampidi-doza. Noho izany, rehefa tsy maintsy mandray fepetra ianao amin'ny trano iray, lakaly, zohy, tionelina na lalan-kely, dia mihena ny risika. Ity rafitra ity dia mihatra amin'ny polisy, polisy miaramila ary hery miasa manokana hanao hetsika fanoherana ny fampihorohoroana na hitazona ny fanaraha-maso any an-tanàna, ambanivohitra na any ivelany. Ity fitaovana ity dia napetraka miaraka amin'ny NIR-LED vitsivitsy, hahafahan'ilay mpandraharaha mikaroka sy manara-maso zavatra amin'ny tontolo maizina.
Ity stereo fihainoana am-peo amin'ny alàlan'ny fitaovana rindrina ity no fanavaozana be indrindra amin'ny vokatra mitovy amin'izany ankehitriny, izay afaka manome ny mpihaino ny fampahalalana an-tsary mazava indrindra ho fantatr'izy ireo. Ity dia fanamafisam-peo manokana izay haka ny tabataba kely indrindra amin'ny alàlan'ny zavatra mivaingana toy ny rindrina, mba hahafahanao mihaino izay mitranga amin'ny lafiny iray hafa. Ny mikrô fifandraisana dia paingam-pandam-bolo novolavolaina manokana hanovana ny hovitrovitra ho tabataba re. Izy io dia manana transducers matanjaka roa miaraka amina fitaovana fanaraha-maso miavaka. Ampiasaina be any amin'ny polisy, fonja ary sampam-pitsikilovana izy io.
Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina, Rafitra fizahana fiara fitaterana finday, Fakan-tsary fakan-tsary, Scanner X-Ray Portable, Fitaratra fitiliana fiara, Masinina scanner X-Ray azo entina,